Nagarik Shukrabar - बुटवलको कोठीमा रुसी र चिनियाँ युवती
बुटवलको कोठीमा रुसी र चिनियाँ युवती
शुक्रबार, १५ चैत २०७५, ०७ : २६ | शुक्रवार
विभिन्न प्रलोभनमा पारेर नेपाली युवतीलाई भारतीय यौन कोठीमा पुर्याउने मात्रै हैन, अहिले खाडी र अफ्रिकी देशमा कामको लोभमा पुगेका नेपाली युवतीहरु समेत जबर्जस्ती यौन बजारमा बेचिने गरेका छन् । मानव तस्करले अफ्रिकी देशमा पु¥याएर त्यहाँका डान्सबार र होटलमा नेपाली युवतीलाई यौनकर्मीको रुपमा प्रयोग गरिरहेको पटक–पटक खुलासा भइसकेको छ ।
यो त भयो विदेशको कुरा । नेपाली यौन बजारमा पनि प्रशस्तै नेपाली यौनकर्मी छन् । ४० हजार हाराहारीमा नेपाली यौनकर्मी रहेको दाबी सुनिने गरे पनि यकिन तथ्यांक कतै भेटिँदैन तर फस्टाएका हरेक शहरमा सहजै भेटिने नेपाली यौनकर्मीको संख्याले यसको बढ्दो माग भने देखाउँछ ।
नेपाली मात्रै हैन, अब नेपाली यौन बजारमा सहजै विदेशी यौनकर्मीसमेत भेटिन थालेका छन् । पर्यटकको आवरणमा नेपाल आएर यौन बजारमा सक्रिय चिनियाँ, रुसी र अफ्रिकी कलगर्लको फेहरिस्त यसअघि पनि शुक्रवारले सार्वजनिक गरेको छ ।
पछिल्ला तथ्यले नेपाल आएका विदेशी यौनकर्मी काठमाडौंमा मात्र नखुम्चिएको देखिएको छ । उनीहरु पोखरा, इटहरी, बुटवल, नेपालगञ्ज, वीरगञ्जसम्म फैलिइसकेका मात्र छैनन्, नेपाललाई सेक्स ट्रान्जिट बनाउँदै भारतसमेत पुग्ने गरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय नेपाली यौन बजारका सक्रिय दलाल र भारतीय यौन बजारका दलालको सहकार्यमा नेपाल आएका विदेशी यौनकर्मीलाई नेपालको खुला सीमा पार गराउँदै भारतीय शहरसम्म पुर्याउने गरेका छन् । नेपाली यौन बजारमा अफ्रिकी यौनकर्मीसमेत फेला पर्ने गरे पनि भारत पुग्नेमा भने चिनियाँ र रुसी मूलका युवतीको संख्या बढी देखिएको छ ।
रात्रीकालीन नेक्सस्बारे जानकार एक स्रोतले चार महिनाअघि पर्यटकको आवरणमा नेपाल आउने चिनियाँ र रुसी यौनकर्मीहरु नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रका होटलमा बसेर अवैध रुपमा भारतका विभिन्न शहर जाने र नेपाली भिसा सकिन लागेपछि उस्तै गरी अवैध रुपमा भारतबाट नेपाल फर्किने गरेको सूचना दिएका थिए ।
‘चाइनिज कन्टिनेन्टल एन्ड रसियन स्विट्स’
बुटवलमा मेरो एकजना घनिष्ठ मित्र विवेक हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई र मेरो साथीलाई दुई महिनाअघि विवाहको कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो । म र साथी जोन निमन्त्रणा मान्न बुटवल पुग्यौं ।
साथी विवेकको दम्पतिलाई शुभकामना दिएर रोल्पा हान्निने योजना थियो हाम्रो तर बेहुलाले मानेनन् । उनले आफ्ना अन्य तीन जना साथीलाई हाम्रो जिम्मा दिँदै भने, ‘हुन्न यार, आज यतै बस्नुपर्छ । म चाइनिज कन्टिनेन्टलको व्यवस्था गरिदिन्छु ।’
मलाई लाग्यो, उनले खानाको कुरा गरिरहेका होलान् । मैले जवाफमा भनेँ, ‘चाइनिज हैन यार, हामीलाई त टिपिकल नेपाली नै मन पर्छ ।’
उसले हाँस्दै भने, ‘अरे यार तेरो नाम मात्र बेबी होइन, दिमाग पनि बेबी नै छ । चुप् लाग्, सरप्राइज दिन्छु ।’
लौ त भनेर पुलाउ खानतिर लागियो ।
विदेशतिर एकाध पटक चिनियाँ खाना खाएको थिएँ । त्यत्ति मीठो लागेको थिएन । त्यसैले सकेसम्म चिनियाँ खाना खान नपरोस् भन्ने लाग्छ ।
पुलाउ खाने बेलामा मैले फेरि ‘चाइनिज त नखाने’ भनेँ । अन्य तीन जना साथी गलल्ल हाँसे मात्र ।
साँझ ८ बज्यो । ती तीन जना साथीहरुले हामीलाई जाउँ भन्ने इशारा गरे । जाने बेलामा ६ जना भयौं । साथीहरुले २ वटा मोटरसाइकल मिलाएका रहेछन् । ३–३ जना बस्यौं ।
बुटवलको ट्राफिक चोक पुगेपछि बाइक दायाँपट्टि मोडियो । वरिपरि फेन्सी पसल र केही होटल थिए । केही भित्र पुगेपछि च्यानल गेट भएको एउटा घर अगाडि बाइक रोकियो ।
घर हेर्दा असाधारण देखिन्थ्यो । भित्र गार्ड रहेछन् । उनी आएर पल्याकपुलुक हेरे र गेट खोले । मोटरसाइकल कम्पाउण्डमा छिराएलगत्तै गेट लगाइहाले । गार्डको व्यवहार देख्दा त्यही बेला कस्तो–कस्तो लागेको थियो ।
चौथो तलामा पुगेपछि मात्र त्यो घरमा पनि मान्छे रहेछन् भन्ने अनुभव भयो । चौथो तलामा संगीतको धुन सुनियो । ढोकामा पुग्दा अगरबत्तीको बास्ना पनि आयो ।
‘कतै काठमाडौंको ठमेलतिरझैँ बारमा ल्यायो कि क्या हो !’ भन्ने लाग्दालाग्दै भित्र छिरियो । हो रहेछ त ! ठमेलतिरकोझैँ भव्य बियर बार देखियो । भित्र क्याबिनहरु थिए ।
हामीसँगै गएकाहरु बारका परिचित ग्राहक रहेछन् । जानासाथ काउन्टरमा बसेका कर्मचारीसँग हाई, हेल्लो गर्दै हात मिलाउन थाले । हामी दुई जना भने नौला थियौं त्यहाँ । उनीहरु जता जान्थे, त्यतै पछि लाग्थ्यौं ।
भित्र क्याबिनै क्याबिन देखियो । ओपन स्पेसमा त्यत्ति ग्राहक थिएनन् । हामी ६ जना त्यस्तै एउटा कोठामा छिर्यौं ।
हामी बसेलगत्तै एक जना वेटर आइन अर्डर लिन । वेटर निक्कै राम्री थिइन् । साथीहरुले बियर, तास, बंगुरको बार्बिक्यु लगायत अर्डर गरे । वेटर मुसुक्क हाँस्दै अर्डर लिएर गइन् ।
साथीहरुले सहजै काख दिए । मलाई भने केही अप्ठेरो लाग्यो । एक त मेरो काखमा बस्न खोेज्ने युवती अलि मोटी नै थिइन्, किचिदेली भन्ने डर ! हेर्दा त राम्री नै थिइन् तर केही नबोल्ने ।
‘हुन्न’ भन्दा पनि फेरि काखमा बस्न खोजेपछि एटिट्युड देखाउँदै नेपालीमा हल्का अंग्रेजी मिसाएर गाली गरेँ तर उनको कुनै प्रतिक्रिया आएन । उनीहरु सँगैकी अर्की युवतीले उनलाई सम्झाउन थालिन् । अनि मात्र उनी नजिकै सोफामा बसिन् ।
ती युवतीलाई उनको साथीले सम्झाउन प्रयोग गरेको भाषा नेपाली थिएन, अंग्रेजी पनि हैन । जापानी, चिनियाँ वा कोरियालीझैँ केही थियो, जुन मैले पहिले कहिल्यै सुनेको थिइनँ ।
‘यिनीहरु त नेपाली हैनन् कि क्या हो ?’ यो घरसम्म ल्याउने साथीलाई मैले सोधेँ ।
साथीले जवाफ दियो, ‘अघि विवेकले भनेको चाइनिज कन्टिनेन्टल यिनीहरु नै हुन्, यार मोज गर्नुस् ।’
नेपालमा चिनियाँ र अफ्रिकी युवतीहरु यौनकर्मीको रुपमा सक्रिय रहेको सुनेको थिएँ । काठमाडौंका नाइट क्लब, लाउन्ज र बारमा भेटिने पनि गर्थे तर बुटवलमा पनि उनीहरु आइपुगेको देखेर म छक्क परँे ।
बोल्दै नबोल्ने लाटीसँग त के बस्नु ! साथीसँग बसेकी अलिअलि नेपाली र अंग्रेजी बुझ्ने कोही छ भने यता पठाइदेऊ भनेँ । साथीले उसैको काखमा बसिरहेकी युवतीलाई मतिर पठाइदियो । मेरो छेउमा बसेकी अर्की युवती ऊतिर गइन् ।
ऊ पनि मेरो काखमा बस्न खोजी तर उसको तौल पनि मेरो काखले थेग्न सक्ने खालको थिएन ।
साथीहरु भने सक्रिय भइसकेका थिए । उनीहरुको हात र मुख दुवै व्यस्त भइसकेको थियो तर मेरो मुडै आएन । मदिराको मातमा मुड आउँछ कि भनेर युवतीलाई बियर पिउन अफर गरेँ । उनी राजी भइन् । तर साथीहरु यत्तिकैमा गायब पो हुन थाले त्यहाँबाट ।
‘कहाँ गएका उनीहरु ? ’
ती युवतीले छ्यासमिसे भाषामा भनिन्, ‘काउन्टरमा १५ सय बुझाएपछि छुट्टै कोठा बस्न पाइन्छ ।’ साथीहरु काउन्टर हुँदै केटी लिएर कोठातिर गए । म उनीसँग कुरा गरेर बसेँ ।
नाम सोधेँ तर खास नाम उनले भनिनन् । नेपाली नाम राखिसकेको रहेछ उनको, प्रीति । मसँग बस्दा पनि उसको हात भने चलिरहेको थियो । म भने काम भन्दा गफ गर्ने मुडमा थिएँ । उसलाई बियरमा कम्पिटिसन दिन थाले । उसले मस्त खाइन् ।
म पनि झ्यापझ्याप भएँ, उनी पनि झ्याप भइन् ।
झ्याप भएपछि त बोल्लिन् कि भनेर सोधेँ, ‘कहाँबाट आएको हो ?’ बल्ल उनी बोल्न थालिन् । उनको घर चीनको तिब्बत रहेछ । उनीसँगै त्यहाँ १७ जना तिब्बती युवती र तीन जना रसियन युवती रहेछन् ।
कुरा गर्दागर्दै उनीहरु बुटवलमै बस्न नआएको खुल्यो । झन् छक्क परेँ । उनीहरु यहाँ केही समय मात्रै बस्ने रहेछन्, उनीहरुको लक्ष्य भने स्थलमार्ग हुँदै भारतको मुम्बई पुग्ने रहेछ ।
उनले भनिन्, ‘भोलि सात जना तिब्बती साथी र तीन जना रुसी साथी मुम्बई जाँदैछन् । म अलि पछि जान्छु ।’
ती युवतीले दिएको जानकारीअनुसार उनीहरुलाई नेपाली र भारतीय नागरिक मिलेर नेपालको सीमा कटाएर दिल्ली र मुम्बईसम्म पुर्याउँछन् । नेपालको पर्यटकको भिषा नसकिएसम्म उनीहरु उतै काम गर्छन्, पासपोर्ट भने नेपाली बोर्डर क्षेत्रकै दलालसँग हुन्छ । उताको काम सकिएपछि नेपाल आउँछन् । भिषा थप्न सक्ने अवस्था भए भिषा थप्छन्, नभए आफ्नो देश फर्किएर फेरि केही महिनापछि पर्यटकको भेषमा नेपाल आउँछन् ।
गफगाफ राम्रै जम्दै थियो, चिनियाँ कन्टिनेन्टल खान गएका साथीहरु फर्किए ।
म पनि नेपाली बियर र चिकेन चिल्लीले झ्याप भइसकेको थिएँ । बाइक चलाउनसक्ने अवस्था थिएन । साथीसँगै नजिकैको गेस्ट हाउसमा गएर सुतेँ ।
विदेशी यौनकर्मी कसरी आउँछन् नेपाल ?
( शुक्रवारले रिपाेर्टिगंका क्रममा काठमाडाैंमा भेटेकाे रसियन मुलका २ युवती जाे फ्ल्याट लिएर देहव्यापारमा सक्रिय थिए)
अधिकांश विदेशी यौनकर्मी नेपालमा पर्यटक भिसामा आउने गर्छन् । केही भिसा म्याद सकिएपछि आफ्नो देश फर्केर पुनः नेपाल आउने गर्छन् भने केही विभिन्न बहानामा भिसा बढाएर यतै बस्ने गर्छन् । शुक्रवारको खोजमा नेपालमा आउने अफ्रिकी कलगर्लहरु ठमेलका गेष्ट हाउसहरुमा रुम लिएर बस्ने गरेको फेला परेको थियो । रुसी मुलुकका युवतीहरु त अपार्टमेन्ट नै भाडामा लिएर बस्ने गर्छन् । आफूले विश्वास गर्ने ग्राहकहरुलाई उनीहरु अपार्टमेन्टमै बोलाएर धन्दा चलाउँछन् ।
धेरैजसो विदेशी यौनकर्मी नेपाली ग्राहकलाई हत्तपत्त विश्वास गर्दैनन् । प्रहरीको सुराकी हो कि भन्ने डरले उनीहरु नेपालीलाई आफ्नो ग्राहक बनाउन डराउँछन् । धेरैजसो उनीहरुको ग्राहक नेपालमा घुम्न आउने विदेशी नागरिक नै हुन्छन् ।
केही महिनाअघि शुक्रवारकर्मीले भेटेको दुई रुसी यौनकर्मीले आफ्नो धेरैजसो ग्राहक भारतीय नागरिक हुने गरेको बताएका थिए । उनीहरुले एकपल्टको १० हजार रुपैयाँदेखि होल नाइटको ३०–४० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको खुलाएका थिए ।
उनीहरुले ग्राहक खोज्न क्यासिनोलाई टार्गेट गर्ने गर्छन् । कानुनअनुसार क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेशमा प्रतिबन्ध छ । त्यसैले टार्गेटअनुसारको ग्राहक खोज्न उनीहरुलाई क्यासिनो नै सहज हुने गर्छ ।
उनीहरू त्यताबाट ग्राहक लिएर आफ्नै फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट लैजान्छन्, कतिपय होटलमै समेत बस्छन् । क्यासिनोपछि उनीहरुको कार्यक्षेत्र नाइट लाइफ मौलाएको काठमाडौंको ठमेल र दरबारमार्ग तथा ललितपुरको झमेलसमेत हो । उनीहरु होटलको बार क्षेत्रमा समेत भेटिन्छन् ।
नेपाल आउने धेरैजसो रुसी, चिनियाँ र अफ्रिकी यौनकर्मी धन्दा राम्रो हुने र ग्राहक धेरै भेटिने हुँदा भारत जान सहमत हुन्छन् । प्रायः नेपालमा भेट भएका भारतीय ग्राहकको डिमाण्डमा समेत उनीहरु भारतीय शहर पुग्ने गरेको देखिन्छ । केहीले भने भारतको यौन बजारमा सक्रिय दलालसँग सम्बन्ध र सम्पर्क रहेका नेपाली दलालको सहयोगमा दिल्ली, मुम्बई र गोवासम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
रसियनमूलका, अफ्रिकी र चिनियाँ नागरिकका लागि भारतीय भिसा पाउन त्यत्ति गाह्रो हुन्न । तर उनीहरु प्रायः नेपाल आएर अवैध रुपमा खुला सीमा हुँदै भारत जाने गरेको देखियो । काठमाडौंको यौन बजारमा रहेका विदेशी यौनकर्मीको खोजीका क्रममा भेटिएकी एक रसियन मूलकी युवतीले हिन्दी भाषा बोलेकी थिइन् । कुराकानीमा उनले आफू यस्तो धन्दा गर्न भारतसमेत जाने गरेको बताउँदै सिधै भारत जाँदा भिसा समस्या हुने भएकाले नेपाल आएर स्थलमार्गबाट भारत जाने गरेको खुलाएकी थिइन् ।